TOP FREE STEAM GAMES: TOP 10 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Top Free Steam Games: Top Ndị isi iri
Ọtụtụ ndị na-enwe mmasị igwu egwu egwuregwu na-akpali mmasị ma dị mma. Taa, nnukwu ewu ewu abiala na egwuregwu Steam, nke kachasị mma n'ime ha bụ nke dị n'elu 10.
Ndị obodo obodo Gotham
Ụzọ nke Ọpụpụ
Mba TrackMania ruo mgbe ebighi ebi
Ọdịdị nke ndị ọgbọ
Enweghi Ulo Ozo na Hel
Ogige ndị agha 2
Agha égbè eluigwe
Na egwuregwu ị ga - ekere òkè na ọgụ PvP dị ike, ịlụ ọgụ maka ọdịiche nke òtù ahụ, nweta òtù dị iche iche.
Obodo ohuru, ebe ndi omekome na-amaghi ama na onu ogugu na-adighi aka. Ihe a nile na-echere onye ọkpụkpọ na obodo San Paro. Ịbụ onye omekome ma ọ bụ iji chebe iwu? Nhọrọ ahụ bụ nke gị.
N'ime egwuregwu ahụ, ndị omempụ jupụtara ebe nile, nke ikike ụmụ mmadụ na-akwado ndị ọrụ afọ ofufo na-alụ ọgụ, akụkụ abụọ ahụ nwere ndepụta nke kọntaktị - ndị dị iche iche na-ede akwụkwọ, na-eweta ọrụ dị iche iche
Nke a na-egosi na ọ bụ onye na-agba égbè. Onye ọkpụkpọ ahụ ga-ahọrọ otu n'ime ndị ọzọ, wee lụso onye iro ọgụ.
Egwuregwu ahụ na-amasị mmasị pụrụ iche pụrụ iche na ụda ihe. Na-amasị ya na ọnụ ọgụgụ nke ngwá agha, ikike ịgbanwe àgwà ya ma bụrụ nke dị jụụ.
N'ọtụtụ egwuregwu, ị nwere ike igwu egwu egwuregwu iri na abụọ n'otu oge ahụ, ha nwere ike ịhazi uwe ha, ngwaọrụ na akụkụ ndị ọzọ nke egwuregwu ahụ.
Hụkwa nhọrọ nke egwuregwu Dendy nke ị nwere ike ugbu a na kọmputa:
Ị bụ onye mba ọzọ na-agbalị ibi ndụ na ụwa gbara ọchịchịrị nke Raclast. Ị na-agbasi mbọ ike maka ndụ gị, ị na-anwa ịbọ ọbọ n'ahụ ndị ga-eme gị ihe a.
Egwuregwu ahụ dị elu na akụkọ akụkọ, site n'enyemaka nke ndị ọrụ nnabata. Mee amụma buru ibu ma gaa ebe ndị rụrụ arụ.
Egwuregwu ahụ zuru oke n'efu ma ọ nweghị ihe na-enye Pay-to-Win.
Ndị na-eto eto na-eto eto na egwuregwu ndị na-egwuri egwu. Na-eche ka ụgbọ ala ụgbọelu nwere ike onye ọ bụla. Egwuri egwu dị mfe ịghọta ma kwadoro ya na nchịkwa elementrị.
O doro anya na gbakwunyere na nnukwu ọsọ ọsọ. Egwuregwu ahụ ga-echetara ụbọchị na-enweghị obi ụtọ mgbe obere agbụrụ mbụ meriri egwuregwu ụwa.
TrackMania - usoro nke ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe, usoro ndị ahụ enwetawo nnukwu ewu ewu n'ihi na a tọhapụrụ akụkụ ndị nweere onwe ha, bụ nke ọ na-abụ ịdọ aka ná ntị e-egwuregwu mara mma
Ụwa mgbe agha mwakpo bụ ebe dị ize ndụ. N'ebe a, na ịlanarị ndị na-anwa anwa ịbanye n'ime ihe efu na-akpali akpali nke post-apocalyptic.
Ohere nke onye na-agba ụta adịghị njọ: ma otu onye na-egwu egwuregwu na ọtụtụ ndị dị. Mmadụ anọ nwere ike isonye n'agha ahụ. E nwere ndị nwere egwuregwu asatọ dị iche iche, ngwá agha maka nke ọ bụla na-echepụta iche iche.
Onye ọhụụ na-adabere n'egwuregwu egwuregwu n'etiti egwuregwu anọ na-ahọrọ ọrụ nke Onye Ọkachamara, Ọkachamara Ọkachamara, Medica ma ọ bụ Technician; Klaasị ọ bụla nwere mkpụrụ akwụkwọ abụọ nwere ike ịhọrọ nke ha.
Egwuregwu a bụ nrọ nke onye ọ bụla bataralarị na atụmatụ nzọpụta ma ọ bụrụ na ọ bụ zombie apocalypse. Iwu kachasị mma nke ụdị. Ụwa gburu site na ọrịa ntiwapụ. Ụyọkọ ndị lanarịrị na onye ọkpụkpọ ahụ na-agbapụ iji gbapụ na mbara igwe ọjọọ.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, "Ọdịdịghị Ọnụ Ọkụ na Hel" na-eduzi ihe ise egwuregwu ise kachasị ewu ewu.
Aha nke egwuregwu ahụ bụ ihe e si na fim bụ Dawn of the Dead - "Mgbe ọ na-adịghị ebe ọzọ na hel, ndị nwụrụ anwụ na-amalite ịbanye na ala"
I nwekwara ike inwe mmasị na egwuregwu ise kachasị mma:
Egwuregwu a ga-ejikwa gị mebie gị n'emeghị enyi, ma ụwa zuru oke. Atumatu di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche na-enye ohere maka uzo na ikike nile.
Egwuregwu ahụ dị nnọọ obere ma na-akwa ọchị n'ụzọ ụfọdụ na ụfọdụ ebe. Otú ọ dị, ezigbo ọchị na nri dị elu na-echekwa egwuregwu a pụọ ​​na nchefu.
N'agbanyeghi na ulo oru siri ike 2 bu otutu ndi ogba egbe, o nwere oke nkpu nke ndi mmadu n'eme egwuregwu di iche iche, tinyere ndi ozo di egwu na egwuregwu vidio ndi ozo.
Banyere Dotas 2 anụghị ma e wezụga ndị ọbịa. Ngwuregwu cyber egwuregwu na-enye gị ohere ọ bụghị nanị ịlụso ndị iro ọgụ, kamakwa iji merie ezigbo ego. Maka nke a, e kerela ndị mmeri pụrụ iche, ego a na-agbata n'ọsọ na-abụkarị ọtụtụ nde dollar.
Egwuregwu ahụ chọrọ dexterity, echiche iche echiche na ike imekọrịta. Enweghị ụgwọ a na-enweghị àgwà dị njọ. Na-enweghị nkà ndị a, onye na-enweghị uche ga-ege ntị n'ọtụtụ mkparị site n'aka ndị ọrụ ibe n'elu ikpo okwu.
Dota 2 bụ ịmị ọrụ cyber na-arụ ọrụ nke ndị otu ọkachamara si gburugburu ụwa na-asọmpi n'ọgbọ egwuregwu na asọmpi dị iche iche.
A egwuregwu buru ibu ma mara mma nke nwere ihe odide ọnụ ọgụgụ na ndị dị egwu. Warframe wepụtara site na nkeji mbụ ma ghara ikwe ka ọ gwụ ruo mgbe a nwalere ndị dike niile n'ime nkà ọ bụla.
Ohere iji meziwanye dike, iji gbanwee ejiji na ịpụta n'akụkụ dị iche iche na-eburu ndị na-eme egwuregwu si n'akụkụ ụwa nile. Ngosipụta nke a - ọlaọcha na ogo nke egwuregwu kacha mma Steam.
Ka ọ na 2018, ọnụ ọgụgụ nke ndị egwuregwu e debara aha na egwuregwu ahụ ruru nde 40, ebe ọnụ ọgụgụ ndị egwuregwu n'otu oge nọ na egwuregwu ahụ karịrị 120,000
Ngwa ọzọ dị mma site na ọkụ ọkụ ọkụ ụwa. Ụwa gara aga nke egwuregwu ụmụaka nke ụlọ ọrụ anaghị adaba maka oghere a. The ndịna-emeputa egwuregwu dị ka ihe nkiri HD. A na-arụ ọrụ egwuregwu ahụ n'ụzọ zuru ezu. Ọrụ na-agafe.
Enwere nnukwu uru bụ enweghị enweghị isi. Usoro egwuregwu ahụ dị ka ezigbo agha. Akpa ntughari a na-atụghị anya ya tinye mmanụ ọkụ. Site na onye iro ahụ na-egbu ụgbọelu ị na-anya, ọdụ nwere ike ịda. Ọ bụghị ndị ígwè na ndị na-arụ ọrụ, na-echefu nchefu mgbe niile.
Egwuregwu ahụ na-eleba anya n'eziokwu nke akụkọ agha nke ngwá agha, na-emepụta ụdị egwuregwu, ndị mmepe na-eji ihe sitere na ihe ngosi nka na ebe nchekwa si mba dị iche iche.
Gụkwaa ihe omume ahụ na nhọrọ nke VR egwuregwu Sony na-egosi na Tokyo Game Show 2018:
Egwuregwu egwuregwu na steam Steam bụ ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma maka ịmara ihe ị nwere. Ha nwere ike ịlụ ọgụ zombies, jikwa ụgbọ elu ma ghọọ cyborg n'emeghị penny.